Ubuntu MATE 20.10 tonga miaraka amin'ireo tondro Ayatana | Ubunlog
Ubuntu MATE 20.10 dia tonga miaraka amin'ireo tondro Ayatana, lahatahiry mavitrika ary ireo vaovao hafa ireo
Manohy ny fihodinana Groovy Gorilla dia mila miresaka momba ny fipetrahana amin'ny Ubuntu MATE 20.10. Tahaka ireo rahalahin'ny volana Oktobra 2020, dia tonga miaraka amin'ny vaovao izy, nefa tsy dia manandanja loatra toy ireo izay nanomboka enim-bolana lasa izay na ireo izay nampidirina tao Ubuntu Budgie 20.10, tsiro nanolotra lisitra be dia be tamin'ity famotsorana ity. Topazo maso ny naoty famoahana, hitantsika fa tsy nahasarika ny sain'ny olona loatra ireo fanovana misongadina.
Ny zavatra voalohany nolazain'i Monica Madon sy Martin Wimpress, izay nanao sonia ny naoty dia ny fahatongavan'i Ubuntu MATE 20.10 miaraka amin'ny MATE 1.24.1. Saingy, na dia izany aza bibikely efa namboarina ary niampy asa vaovao manararaotra ity fandefasana ity, mampahatsiahy antsika ihany koa izy ireo fa ireo izay maniry fandefasana azo antoka kokoa, amin'ny lafiny fitoniana, dia tokony hijanona ao amin'ny Focal Fossa izay natomboka enim-bolana lasa izay.
Zava-nisongadina tamin'ny Ubuntu 20.10 Groovy Gorilla
Manohana mandritra ny 9 volana, hatramin'ny Jolay 2021.
Active Directory na Active Directory, zavatra azo ampifandraisina amin'ny fametrahana ny rafitra miasa.
Misy fiovana anatiny lehibe, izay ny tondro Ayana. Izy ireo dia forkan'ny sainan'i Ubuntu izay noforonina tamin'ny voalohany ho an'ny GNOME 2.
Mampiasa Artica Greeter koa izy ireo.
Ny Cheese dia nosoloin'i Webcamoid ho fampiharana fakan-tsary tsy mihetsika.
Fanohanana Raspberry Pi 4, saingy havoaka afaka andro vitsivitsy ny sary.
Ny fangatahana nohavaozina amin'ny kinova farany azy ireo, toa ny Firefox 81, izay havaozina tsy ho ela ho v82, LibreOffice 7.0.2, Evolution 3.38 ary Celluloid 0.18.
Fanatsarana ny fiarovana.
BlueZ 5.55, izay, nampiana ireo patch kernel, dia manamboatra ny lesoka fiarovana amin'ny Bluetooth fantatra amin'ny anarana hoe BleedingTooth.
Mpitantana tambajotra 1.26.2.
Ubuntu MATE 20.10 Groovy Gorilla azo alaina izao avy amin'ny tranokalan'ny mpampivelatra, izay azontsika idirana Ity rohy ity. Ireo mpampiasa efa misy dia afaka manavao amin'ny alàlan'ny baiko "sudo do-release-upgrade -d" tsy misy teny nalaina.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: ubunlog » dabilio » Birao hafa » Ubuntu MATE 20.10 dia tonga miaraka amin'ireo tondro Ayatana, lahatahiry mavitrika ary ireo vaovao hafa ireo
Ubuntu Studio 20.10 dia miova amin'ny Plasma amin'ny inona, tsy isalasalana, ny zava-baovao miavaka indrindra
Ubuntu Budgie 20.10 tonga miaraka amina endrika vaovao ao amin'ny biraonao, applet, lohahevitra ary ny efijery fandraisana